Turkiga oo daabulay muwaadiniintiisa Norway ku sugan. - NorSom News
Turkiga oo daabulay muwaadiniintiisa Norway ku sugan.
Dowlada dalka Turkiga ayaa daad gureyn u sameysay ilaa 3600 qof oo ku sugan sagaal wadan oo Yurub ah, Norweyna ay kamid tahay. Wadamada sagaalka ah ee dadka laga qaaday ayaa ah wadamada uu ku faafay caabuqa Corona-virus.
Turkiga ayaa 34 diyaaradood usoo diray si dadkaas dalkoodii loogu celiyo. Waxeyna isugu jiraan dal-xiisayaal, ganacsato iyo ardey Turki ah oo xiligan ku sugan wadamo Yurub ah.
Dalalka dadkan laga daad-gureynayo ayaa ah Germany, Spain, Faransiiska, Austrlia, Norway, Denmark, Sweden, Belgiumka iyo Holland. Turkiga ayaa sidoo kale joojiyay duulimaadyadii ugu imaan jiray sagaalkan wadan.
Muwaadiniinta Turkida ah ee dalalkaas laga qaado ayaa lagu sameyn doonaa Karantiilis socon doonto mudo 14 maalmood ah.
Xigasho/kilde: Tyrkia evakuerer statsborgarar frå Noreg
Previous articleNorway: 3 qof oo maanta u geeriyooday Corona-virus.
Next articleWadamada Yurub oo gacmaha u taaganayo Shiinaha.